Fitaovana fanamboarana sy fanarenana fidirana. Access Fix Software
DataNumen Access Repair dia ny tsara indrindra Fitaovana fanamboarana sy fanarenana fidirana eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia afaka manamboatra ny angon-drakitra Access .mdb sy .accdb maloto ary mamerina betsaka araka izay tratra ny angon-drakitrao, noho izany mampihena ny fatiantoka amin'ny kolikoly fisie.
Nahoana DataNumen Access Repair?
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe momba ny vokatra fanarenana Access. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Access Repair manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Access Repair mifoka ny fifaninanana
Na eo aza izany, na dia tamin'ny voalohany aza dia nieritreritra aho fa vola be no laniana amin'ny programa kely iray,
Na eo aza izany, na dia tamin'ny voalohany aza dia nieritreritra aho fa vola be no laniana amin'ny programa kely iray, DataNumen Access Repair sitrana angon-drakitra tahiry ka faly aho izao;)
Wow ny rindrambaiko ataon'olom-bitsy dia nampidina ny rindrambaiko fitsapana aho ary afaka nampiseho tamiko ireo latabatra rehetra izay ananako. Ity rindrambaiko maivana ity
Misaotra niverina tamiko. Efa nividy ilay rindrambaiko aho ary nahazo ny rohy hampidinana ny rindrambaiko avy hatrany. Nametraka azy aho dia niasa
DataNumen Access Repair manangona angona betsaka kokoa noho ny vokatra hafa nampiasako. Nanampy ahy hitahiry tahiry maro izay simba izany. Izaho dia
Davis, CA, Etazonia
Jona 16, 2015
Santo Domingo, Repoblika Dominikanina
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra noho ny Fandraisana kolikoly momba ny fidirana amin'ny data
Format Database tsy ekena
Mila amboarina ny tahiry 'filename.mdb' na tsy rakitra rakitra.
Tsy nahita ilay zavatra 'xxxx' ilay motera database an'ny Jet Jet.
Tsy azo vakiana ny firaketana; tsy misy alalana vakiana amin'ny 'xxxx'.
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Access Repair v3.8
Fanohanana amin'ny fanamboarana ny Microsoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ary ny fidirana amin'ny angon-drakitra Office 365.
Tohano hanarenana ireo firafitra sy firaketana ireo latabatra ao amin'ny data Access.
Tohano hanarenana ny sahan'ny MEMO sy OLE.
Fanohanana an'i sitrana ireo latabatra voafafa ary firaketana an-tsoratra amin'ny Access data.
Fanohanana hamerenana ny sahan'orinasa sy ny index.
Fanohanana hanarenana ny fifandraisana.
Fanohanana hamerenana ny fangatahana.
Tohano hamerenana ireo angona fidirana miafina miafina.
Fanohanana hanamboarana ny fidirana mdb sy rakitra accdb amin'ny haino aman-jery maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra Access mdb sy accdb hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana, araka ny masontsivana sasany.
Tohana hanamboarana antontan-taratasy Access mdb sy accdb.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra mdb sy accdb fisie miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
mampiasa DataNumen Access Repair hamerenana ireo tahiry fidirana amin'ny kolikoly
Rehefa simba na simba ny tahiry Microsoft Access (.mdb na .accdb) ary tsy azonao sokafana ara-dalàna dia azonao atao ny mampiasa DataNumen Access Repair hijerena ireo rakitra ary hamerina ireo angon-drakitra araka izay tratra.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana rakitra rakitra mdb / accdb Access simba na simba DataNumen Access Repair, azafady hakatony ny Microsoft Access sy ireo rindranasa hafa mety manova ny rakitra mdb / accdb.
Safidio ny rakitra Access mdb / accdb Access simba na simba hanamboarana:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny filename mdb / accdb na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra.
Default (nitranga in- DataNumen Access Repair dia hitahiry ny tahiry fidirana raikitra ao anaty fisie vaovao antsoina hoe xxxx_fixed.mdb, izay xxxx no anaran'ilay rakitra mdb / accdb loharano. Ohatra, ho an'ny fisie Damaged.mdb, ny anarana default ho an'ilay fisie raikitra dia ho Damaged_fixed.mdb. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Access Repair start scanning sy fanamboarana ny rakitra mdb / accdb loharano. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana, raha afaka amboarina amin'ny fomba mahomby ny tahiry mdb / accdb loharano dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny tahiry mdb / accdb raikitra miaraka amin'ny Microsoft Access na rindranasa hafa.
DataNumen Access Repair 3.3 dia navoaka tamin'ny 10 Desambra 2020
DataNumen Access Repair 3.1 dia navoaka tamin'ny 31 Oktobra 2020
DataNumen Access Repair 3.0 dia navoaka tamin'ny 27 Mey 2020
DataNumen Access Repair Navoaka tamin'ny 2.9 Novambra 18 ny 2019
DataNumen Access Repair Navoaka tamin'ny 2.8 Aogositra 5 ny 2019
DataNumen Access Repair Navoaka tamin'ny 2.7 aprily 18 ny 2019
DataNumen Access Repair 2.6 dia navoaka tamin'ny 21 Janoary 2019
Fandraisana Access 2019.
DataNumen Access Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 22 Oktobra 2018
Fandraisana fidirana amin'ny Office 365.
DataNumen Access Repair 2.3 dia navoaka tamin'ny 11 Febroary 2018
Fandraisana Access 2016.
DataNumen Access Repair 2.2 dia navoaka tamin'ny 10 Aogositra 2013
Hatsarao ny fampifanarahana ny fampiharana amin'ny DAO sy Access.
DataNumen Access Repair 2.1 dia navoaka tamin'ny 15 Mey 2009
DataNumen Access Repair 2.0 dia navoaka tamin'ny 16 Jolay 2008
Databases Access Access 2007.
Tohano Windows Vista.
DataNumen Access Repair 1.2 dia navoaka tamin'ny 19 Nov 2006
Hatsarao ny motera fanamboarana.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra MDB hamboarina amin'ny solosaina eo an-toerana, araka ny mason'ny fikarohana sasany.
DataNumen Access Repair 1.1 dia navoaka tamin'ny 20 Desambra 2005
Tohano hanarenana ny sahan'orinasa.
Fanohanana hahazoana sitraka.
DataNumen Access Repair 1.0 dia navoaka tamin'ny 18 Jona 2004
Tohana hanamboarana ny tahiry Microsoft Access 95, 97, 2000, XP ary 2003.
Fanohanana hamerenana amin'ny laoniny ny firafitra sy ny firaketana ireo latabatra ao amin'ny data Access.
Tohano hamerenana ireo latabatra sy rakitsoratra voafafa ao amin'ny tahiry Access.
Fanohanana hanamboarana ireo rakitra mdb Access amin'ny haino aman-jery maloto, toy ny disk floppy, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano hanamboarana antontan-taratasy Access mdb.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra rakitra mdb miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer mora foana.
Avereno ny kolikoly Oracle DBF rakitra tahiry.